Un अद्वितीय उद्योग डिजिटल मार्केटिंग सल्लाह
बिहीबार, अप्रिल 14, 2016 मङ्गलबार, अप्रिल 12, 2016 मुहम्मद यासीन
यसमा कुनै प्रश्न छैन कि डिजिटल मार्केटिंग एक शक्तिशाली जनावर हो - र त्यसमा एक Helluva fickle जनावर। जति हामी सबै मान्न चाहान्छौं कि डिजिटल मार्केटिंग आधारभूत रूपमा जस्तोसुकै भए पनि, यो प्रायः पक्कै होइन - र यसका कारणहरू स्पष्ट छन्। एक व्यवसायको रूपमा, तपाईं आफ्नो समय र बजेटको केहि प्रतिशतहरू विभिन्न प्रकारका डिजिटल मार्केटिंगमा समर्पित गर्न सक्नुहुन्छ: सामाजिक मिडिया, पीपीसी, retargeting, भिडियो मार्केटि,, ई-मेल मार्केटिंग, SEO, वेबसाइट उपकरण अप्टिमाइजेसन र यस्तै।
अझै, के देख्न अझ रमाईलो छ विभिन्न उद्योगहरूले उनीहरूको डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। किनभने बिभिन्न उद्योगहरूले स्पष्ट रूपमा धेरै बिभिन्न व्यापार लक्ष्यहरू लिन लागेका छन्, केवल केहि उपकरणहरू र प्लेटफर्महरू जुन ती परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छन् लिभरेज गरिनेछ। र यो विशेष रूपमा चाखलाग्दो छ कि कसरी बिभिन्न उद्योगहरूले आफूलाई अनलाइन प्रस्तुत गर्दछन् र उनीहरू कसरी उपभोक्ता र सम्भावनाहरूको लागि उपलब्ध छन्।
मेरो क्यारियर को दौरान, म धेरै बिभिन्न उद्योगहरु मा मार्केटिंग मान्छे धेरै भेटेको छु। मेरो भिडन्तहरूको समयमा, मैले उनीहरूको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्ने मार्केटि tact रणनीतिहरूको बारेमा धेरै सिकेको छु। अपेक्षित रूपमा, धेरै रणनीतिहरू ती विशिष्ट उद्योगहरूतिर केन्द्रित थिए - र हो, तिनीहरू सफल भएका छन्। यदि तपाईं तल industries मध्ये कुनै पनि उद्योगमा मार्केटर हुनुहुन्छ भने, तपाईं पढ्न जारी राख्नुहुनेछ। Unique अद्वितीय उद्योगहरूका लागि effective प्रभावी डिजिटल मार्केटिंग सल्लाहहरू यहाँ छन्।
ह्यान्ड्स डाउन, मार्केटका लागि सबैभन्दा कठिन उद्योग मध्ये एक चिकित्सा उद्योग हो। यसको लागि सब भन्दा प्राथमिक कारण यो हो कि तपाईं साहसी दाबीहरू गर्न सक्नुहुन्न "यो विशेष उपचार तपाईको बिरामीलाई निको पार्छ।" धेरै जसो केसहरूमा तपाई केवल प्रमाण मात्र उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ कि यसले ठूलो संख्यामा व्यक्तिलाई सहयोग पुर्‍याएको छ (उदाहरण: "यो उपचार 98%% प्रभावकारी छ"), वा यसले मद्दत गर्न सक्छ। स्पष्ट रूपमा, यो १००% वैधता मुद्दा हो।
अझै, कानुनी रूपमा अनुमोदित सन्देश उत्पादनको साथ आउने प्रतिबन्धहरूको बाबजुद पनि, अस्पतालहरू, क्लिनिकहरू र अन्य चिकित्सा सुविधाहरूसँग अझै पनि एउटा ठूलो अवसर छ (र पर्याप्त लचकता) वास्तवमै "उनीहरूको सामानहरू स्ट्रट गर्न।" चिकित्सा उद्योगमा यो गर्न उत्तम तरिका मध्ये एक तपाईंको व्यवस्थित मानवीय बनाउनु हो र तपाईंको ख्याल देखाउनुहोस्। स्वास्थ्य सेवा एक धेरै गम्भीर कुरा हो; त्यसोभए किन तपाइँको ग्राहकहरू (वा बिरामीहरू, बरु) तपाइँको सबै भन्दा राम्रो रूचिमा छन् भनेर देखाउन अतिरिक्त माईलमा जानु हुँदैन।
यद्यपि तपाईंको संगठनले निश्चित रूपमा यी वेबसाइटहरू र अन्य मार्केटिंग कोलटारलमा यी मानवीय मानहरू दर्साउँदछ, सोशल मिडिया एक नयाँ सजिलै तरीकाले लगातार नयाँ र हालका बिरामीहरूलाई हेरचाहको सन्देश प्राप्त गर्दछ। मानक प्रशासनिक घोषणाहरूको साथसाथै (उदाहरण: यो कार्यालय निर्माणको लागि बन्द हुनेछ। वा डा। विलियम्स अफिस बाहिर छन्), तपाईंको सोशल मिडिया कोअर्डिनेटरले थप माईलमा जान सक्छ र जाडोको समयमा स्वस्थ रहनको बारेमा लेख साझा गर्न सक्दछ, वा सामान्य सुझावहरू प्रस्ताव गर्दछ। एक स्थानीय घटनामा स्वस्थ रहन को लागी (उदाहरण: राज्य मेलामा स्वस्थ विकल्पहरू)। राम्रो स्वभावका तस्बिरहरू साझेदारी गर्दा बिरामीहरूलाई तपाईंको ब्रान्डसँग सहजै महसुस हुन्छ - जस्तै पुलिस अफिसरहरूको फोटो नर्सि staff स्टाफका लागि डोनट छोड्दैछन् बिग छुट्टीको सप्ताहन्तमा। यो साना चीजहरू हुन् जसले तपाईंको संगठनलाई बाँकीबाट भिन्नता दिन्छ। कम्फर्ट भनेको # १ भावना हो जुन बिरामीहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकको खोजीमा वा उनीहरूले शल्यक्रियाको लागि कहाँ गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा महसुस गर्न चाहन्छन्।
चिकित्सा उद्योग जस्तै, मोटर वाहन उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी छ ... हुनसक्छ यो अझ प्रतिस्पर्धी हो। व्यक्तिहरू पक्कै कस्तो अस्पताल र क्लिनिकहरू जान चाहान्छन् भन्ने प्राथमिकताहरू छन्, तर जब धक्का पुग्छ, यदि तपाईंसँग आपतकालिन छ भने, तपाईं पहिले नजिकको अस्पतालमा जाँदै हुनुहुन्छ। अस्पताल सामान्यतया खुला रहनेछ - तर केहि अझ राम्रो गर्छ, र अरू भन्दा राम्रो प्रतिष्ठा छ।
यस दिन र उमेरमा, यद्यपि मोटर वाहन उद्योग मात्र यसको अनलाइन उपस्थितिको रूपमा राम्रो छ। किनभने कारहरू त्यत्ति ठूलो लगानी हो, उपभोक्ताहरूले अनलाइन जतिसुकै सम्भव भएसम्म अनुसन्धान गर्छन् - जसमा तपाईंको डीलरशिपको वेबसाइटलाई माथिबाट तल अन्वेषण गर्न पनि समावेश छ। त्योले भन्यो, यदि तपाइँ सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाइँका उपभोक्ताहरू उनीहरूको कार खरीद यात्राको अवधिमा तपाइँको वेबसाइटमा व्यस्त रहन्छन्, तपाइँ बिल्कुल तपाइँको कार डीलरशिप अनलाइन मार्केटिंगमा अतिरिक्त ध्यान दिन आवश्यक छ; र तपाईंको सूची र प्रोमोशनहरू सबै अद्यावधिक राख्नुहोस्। व्यक्तिसँग तपाईंको डिलरशिप अप कल गर्न र समय सोध्नुपर्दैन यदि केहि उपलब्ध छ वा पदोन्नति अझै चलिरहेको छ भने। यदि तपाइँको वेबसाइट मा केहि उपलब्ध छ, उपभोक्ताहरूले यो धेरैमा भएको आशा गरिरहेका छन्। थप रूपमा, उपभोक्ताहरू हाल तपाईंको वास्तविक शोरूममा उपलब्ध सबै थोक प्रयोग गर्न सक्षम हुन चाहन्छन्। जब उपभोक्ताहरूले अनलाइनमा रुचि राख्नु भएको सवारी देख्नेछन्, मौका राम्रो छ जुन उनीहरूको शीर्ष car कार विकल्पहरूमा जान्छन्; त्यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको साइट पछाडि नहोस्।
अन्तिम, र सबै भन्दा चुनौतीपूर्ण उद्योग म चर्चा गर्दै छु रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट हो! कारण मँ भन्छु "धेरै चुनौतीपूर्ण" को कारण हो रखरखावको सरासर रकम आवश्यक छ सबै अनलाइन समीक्षा, टिप्पणीहरू र सबै भावनात्मक स्पेक्ट्रम भर उपभोक्ताहरूबाट आउँदै गरेको उजुरी ह्यान्डल गर्न। र जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, छिटो र अधिक प्रभावकारी रूपमा एक रेस्टुराँको मुद्दा हल हुन्छ, यो उनीहरूको प्रतिष्ठाको लागि राम्रो हुन्छ दुबै अनलाइन र अफलाइन। अनलाइन प्रतिक्रिया, पोष्ट पोष्ट गर्न कत्ति सजिलो भएकोले प्रतिक्रिया दिन सबै प्रयास गर्नु पर्छ प्रत्येक टिप्पणी गर्न जब जब संभवतः मानवीय सम्भव छ - सकारात्मक वा नकारात्मक! फेरि, जीवनको लागि कसैलाई ग्राहकमा परिणत गर्न अलि धेरै नै लामो बाटो जान्छ।
फेसबुक जस्ता सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूले शाब्दिक रूपमा प्रयोगकर्ताहरूलाई सार्वजनिक रूपमा संगठनहरूलाई रेट गर्न अनुमति दिन्छ, साथै समीक्षा छोड्दछ। यदि तपाईं पृष्ठ व्यवस्थापक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तत्काल सूचनाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ जब कोही तपाईंको पृष्ठमा समीक्षा छोड्दछन्। तिनीहरूमा सकारात्मक प्रभाव छोड्नको लागि सबैभन्दा उत्तम र शिष्ट कुरा भनेको उनीहरूलाई २ 24 घण्टा भित्र प्रतिक्रिया दिनुहोस् - विशेष गरी यदि यो एक नकरात्मक समीक्षा हो। जब उपभोक्ताहरू क्षणको तातोमा हुन्छन्, तिनीहरू चीजहरू एएएसएपीमै समाधान गर्न चाहन्छन्।
यदि एक नकारात्मक समीक्षा को लागी जवाफ दिईएको छ भने, कसरी तपाईं चीजहरू अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। यदि यो सकारात्मक समीक्षा हो भने, उही समयसीमा भित्र धन्यवाद दिन समय लिनुहोस्। न केवल प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको उपभोक्ता समीक्षाहरू हेरिरहेका छन्, तर उनीहरूले तपाईंले उनीहरू कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरू देख्दछन्। समीक्षा नकरात्मक हो कि होइन यसको पनी, तपाइँले आफूलाई ग्राहकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने तरिका भनेको एक टेबटका लागि पर्खिरहेका मान्छेहरूको खचाखच भरिएको कोठा बीचको भिन्नता; र प्रत्येक २ घण्टामा ग्राहक व्यावसायिकता सबै कुरा हो! रेस्टोरन्टर्स पनि येलप र अर्बन्सपुन जस्ता अन्य समीक्षा साइटहरूमा उपभोक्ताहरूलाई जवाफ दिन स्वागत छ।
जबकि यो सत्य हो कि डिजिटल मार्केटिंगका विभिन्न पक्षहरू प्राय: संगठनले प्रयोग गर्न सक्दछन्, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफर्मका प्रकारहरू र युक्तिहरू उद्योगमा आधारित फरक फरक हुन्छन्। के एक उद्योग को लागी महत्वपूर्ण मानिन्छ अर्को अर्को को लागी महत्वपूर्ण महत्व नहुन सक्छ। बिभिन्न उद्योगहरूका बिभिन्न लक्ष्यहरू छन्, र यसकारण, अनलाइन उपभोक्ताहरूलाई मार्केटिंग गर्न विभिन्न तरिकाहरू।
टैग: मोटर वाहन बजारडिजिटल मार्केटिङउद्योग डिजिटल मार्केटिंगउद्योग मार्केटिचिकित्सा बजाररेस्टुरेन्ट बजारमार्केटिंग खोज्नुहोस्सामाजिक संजालसामाजिक मिडिया मार्केटिङ
मुहम्मद यासीन PERQ (www.perq.com) मा मार्केटिंग निर्देशक, र एक प्रकाशित लेखक, बहु-च्यानल विज्ञापनमा विश्वास गर्दछ जुन परम्परागत र डिजिटल माध्यम मार्फत परिणाम दिन्छ। उनको काम आईएनसी, एमएसएनबीसी, हफिंगटन पोष्ट, भेन्चरबिट, रिडराइटवेब, र बजफिड जस्ता प्रकाशनहरूमा उत्कृष्टताको लागि मान्यता प्राप्त छ। अपरेसनहरू, ब्रान्ड अवेयरनेस, र डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिमा उनको पृष्ठभूमि परिणाम स्वरूप डाटा स्केलेबल मिडिया मार्केटि campaigns अभियानको सिर्जना र पूर्तिको लागि डाटा संचालित दृष्टिकोणमा परिणाम दिन्छ।
१२ पाठ चरम स्वामित्वबाट मार्केटिंगमा लागू गरियो
पारंपरिक-डिजिटल विज्ञापन विभाजन ब्रिज गर्दै
जुलाई,, २०१ at 15::2016। बिहान
यसले प्रमाणित गर्दछ कि डिजिटल मार्केटिंग केवल एक संकीर्ण शीर्षक मात्र होइन तर फराकिलो र लचिलो हो। डिजिटल मार्केटि technology टेक्नोलोजीले मार्केटिंग संसारको सनकी परिभाषा दिन्छ। चिकित्सा, मोटर वाहन र रेस्टुरेन्ट उद्योग विश्व मा धेरै अग्रणी उद्योगहरु को हो। त्यसद्वारा, म सहमत हुन सक्छु कि डिजिटल मार्केटिंगले पूरै नयाँ लेभल लिएको छ।